စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/03/2020)
ဘရစ္စဘိန်းကွင်းစ်လန်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်ခြင်းဖြင့်မင်္ဂလာရှိ A-list ကိုဆွဲဆောင်မှု ပင်လယ်ပြင်ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့တူ, တောင်ပိုင်း Bank ၏ဒဏ်ငွေမြက်ခင်းပြင်များနှင့်ဥယျာဉ်, နှင့်ပုံပြင်တံတားအများအပြားကပို - သြစတြေးလျရဲ့ အရှည်ဆုံး cantilever တံတား.
ဒါဟာအစတစ်ဦးဖန်တီးမှုမြို့ရဲ့, နှင့် အတတ်ပညာ ပြတိုက်နှင့် ပြခန်း နှင့် chic ကဖေး aplenty, ပေါင်းကစုံလင် Springboard င် ရွှေကမ်းခြေကမ်းခြေ, ပင်လယ်, နှင့်လှိုင်း.
တွင် 21 ကီလိုမီတာရှည်လျားသော, ဒါကြောင့်အစေခံပါလိမ့်မယ် 18 တမြို့တလျှောက်လုံးဘူတာနှင့် ဒေသခံများက နှင့် ခရီးသွားဧည့် သူတို့နှစ်သက်သောအဖြစ်ရောနှောအပေါ်နဲ့ off ခုန်နိုင်ပါလိမ့်မည်.
ဘရစ္စဘိန်း လေဆိပ် Fonzie ဆရာတော်ကြီးနဲ့တူကဖေးများကတိုးမြှင့်ရဲ့အလုပ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာဖြစ်ပါသည်, Transit ဇတူသောအရက်ဆိုင်များနှင့် Looking4.com တူသောယာဉ်ရပ်နားပံ့ပိုးပေး.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tips-brisbane-train/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)